लघुकथा : खुत्रुके र कात्रोको साइनो
बाबुराम न्यौपाने ‘उत्स’, दमक, झापा
हिउँदको चिसो सिरेटो चलिरहेको समयमा रामदयाल एकाबिहानै महाजन ठाकुर यादवका घरमा पुगेर नमस्कारको हात मात्र के उठाएको थियो । मुखबाट पानको रस पिच्च थुक्तै समहाजन कड्कियो ।
‘घरधन्दा सघाउन राखेकी तेरी छोरी एकहप्ता देखि आएकी छैन कहाँ मरी ?’
रामदयाल एकछिन् त चुपलाग्यो । उ विवश थियो । नभनेर धरै थिएन ।
उ भन्न थाल्यो ! ‘मालिक : छोरी सारै बिरामी छ । तीनदिन अघाडी हेल्थपोष्ट पुर्याएर ल्याँए । सदरमुकाम ठूलो डाक्टरलाई जँचाउन तुरुन्त लानु भनेकोछ । झारफुक पनि गराएँ । सुधार आएन । पाँच हजार रुपियाँ ऋण दिनु न .रातदिन मजदुरी गरेर भए पनि व्याज सहित तिर्छु ।’
अँ हँ ! आँसु र याचनाले ठाकुरको मन पटक्कै पग्लिएन ।
रामदयाल किंकर्तव्यविमूढ भारी पइताला रित्तैहात करिब दुई किलोमिटर टाढा रहेको आफ्नू घरतिर फर्क्यो ।
उसका मनमा अनेक कुरा खेलिरहेका थिए !
‘सहकारीतिर सेयर हाल्न सकिन,समूहको ऋण तिर्न बाँकी नै छ । बिक्री गर्ने जायजेथा केही छैन । छाक टार्नै जीवनभर धौ धौ भयो । अब कुन पैसाले उपचार गराएर छोरी बचाउँ ।’
हिजोमात्र एक्ली छोरीको चौधौं जन्मदिन खुशीले सम्झिएको थियो ।
घरपुग्ना साथ छोरी भएको बिछ्यौना तिर लम्क्यो । फूलवा छोरीकै छेउमा थिइन् ।
छोरीलाई बोलायो । ‘छोरी कस्तो छ ?’
निधार छाम्यो ,भत्भती हातैपोल्ने ज्वरो छ । छाती धड्किएको छ । उ आत्तियो ।
छोरी अचेत अवस्थामेै मुस्किलले भन्दै थिई ! ‘बाबु मलाई ठूलो डाक्टर कहाँ लगेर बचाउँनु न । मलाई बाँच्न रहर छ । म सबै ऋण तिर्छु ।’
रामदयालले अकस्मात फूलवाको खुत्रुके सम्झियो । उता छोरीका आँखा मलिन हुँदै गए, बोली मन्दहुँदै गयो । बाबुको काखलाई सिरानी बनाएको शरीर लत्रक्क लत्रियो ।
रामदयाल विवशता र करुणाका आँसुको समुद्रमा डुब्यो । छेउमा अर्धचेतन अवस्थाकी फुलवालाई हेर्यो । छरछिमेक आफन्त जम्मा हुँन थाले । मुटुमा गाँठो पारेर छोरीको मृत शरीर आँगनमा निकाल्यो ।
जम्मा हुँदै गएको भीडका चारैतर्फ पटकपटक नियाल्यो । केही सुझेन ।
सटासट घरभित्र पस्यो । फूलवाले जतनसाथ राखेको माटाको खुत्रुके एकपटक सुम्सुम्यायो, कमेजको फेरले आँसु पुछ्यो र अरु विकल्प नदेखी खुत्रुके फुटायो ।
‘छोरीको बिहेलाई थप्थाप हुन्छ । खुत्रुकेमा यसो दुई चार पैसा जम्मा गर्नुपर्छ है……।’
खुत्रुके किनेर ल्याएका दिन फुलवाले भनेको आवाज रामदयालको कानमा गुञ्जिरह्यो ।
जम्मा सातशय सतासी रुपियाँ रहेछ । बाहिर आएर कसैलाई कात्रो किन्न बजार पठायो । बेहुलीको रातो पहिरन झलक्क सम्झियो ।
अनि : छोरीलाई छातीमा टाँसेर रोइरह्यो….भक्कानिरह्यो ।